Gudoomiyaha Guddiga wada Xaajoodka Eng. Xuseen Maxamed Cadow oo raali geliyey Isbahaysiga SNA
Buluugleey July12, 2005
Shir ay ka soo qeyb galeen Gudiga wada Xaajoodka Nabadeynta Gobolka Banaadir iyo Isbahaysiga SNA oo uu madaxa ka yahay Mudane Xuseen Cayddid ayaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho. Ujeedada kulankaas waxey aheyd sidii loogu guuleysan lahaa nabadeynta gobolka Banaadir iyo weliba sidii ay iskaga kaashan lahaayeen ururada bulshada rayidka iyo mas’uuliyiinta labada gole.
Ka dib Markii wada hadalku uu soo gabagaboobey ayaa Guddoomiyaha Guddiga wada Xaajoodka Eng. Xuseen Maxamed Cadoow wuxuu saxaafadda uga waramay waxyaabihii kulankaas la iskula soo qaaday, wuxuuna hadallo kooban ku sheegay in eedeyn ay uga timid Isbahaysiga SNA oo ku saabsaneyd in aan markii horeba laga qayb gelin howlihii Isbaaro qaadista ee magaalada Muqdisho. Eng Caddow oo hadalkiisa sii wato ayaa yiri “Waan uga cudurdaaranay arrintaas, Waxaana isku afgaranay dhamaanteen in si wada jir ah looga wada shaqeeyo nabadeynta gobolka Banaadir”. Waxaan kaloo isku afgaranay ayuu yiri Eng. Cadow in laga wada tashado howl kasta oo la qabanayo iyo in lala wada hadlo dhamaan dadka madaxda u ah qeybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo howlaha nabadeynta gacan buuxda ka gaysan kara sidii guud ahaan Isbaarooyinka looga suulin lahaa magaalada Muqdisho.
Waxaa sidoo kale saxaafada isna ugu waramay kusimaha gudoomiyaha SNA Mudane Abuukar Ganeey oo sheegay in gudiga loo xilsaaray Isbaaro qaadista iyo nabadeynta degaanka Gobolka Banadir aysan haba-yaraatee la soo xiriirin isbaheysiga muddadii 3-da bilood aheyd oo ay wadeen howlaha lagu tirtirayo isbaarooyinka. Wuxuuna Kusimaha Gudoomiyaha SNA xusay in iyaga iyo guddiga wada xaajoodka ay isla meel dhigeen in laga wada shaqeeyo nabadeynta Gobolka Banaadir lagana qayb qaato howlaha lagu sugayo nabadgelyada Gobolka Banaadir.
Shirkaas ka dhacay hotel Saxafi ayaa siyaasiyiinta iyo dadweynaha deggen magaalo madaxda Soomaalida ay ugu muuqtaa tallaabo weyn oo loo qaaday dhinaca nabada. Isafgaradkaas wuxuu xoog cusub ku soo kordhiyey siyaasiyiinta ku dadaalaya nabadeynta magaalada Muqdisho, wuxuuna si toosa u taageerayaa go’aanada xildhibaanada ay ku doonayaan in lagu hirgeliyo nidaamka dib-u-heshiisiinta.
Dadka aad u dersa dhaqanka kooxaha iyo dagaaloogayaasha waxey arrimaha nuucan oo kale ah u fasiraan abaabul cusub oo dib loogu soo celinayo isbaheysigii ciidan ee USC, kaas oo ay ujeedadiisu tahay in xabashida iyo xulafadooda Soomaalida looga difaaco duulaanka ay la damacsan yihiin iney ku waxyeeleeyaan dadweynaha dega magaalada Muqdisho oo sida adag uga soo horjeeda danaha cadowtinimada Itoobiya ay ku qeybineyso dalka Soomaalida.